Cunto: Sida loo sameeyo Wareegga Webka wax ku ool ah?
xirfadle halkii aad ka heli lahayd dhammaan xogta bartilmaameedka ah hal mar. Xirfadlaha HTTP wuxuu kuu ogolaanayaa inaad bogto bogagga shabakadaha ka soo jeeda shabakadaha bartilmaameedka. Shabakada waxaa buuxsamaya macluumaad qiimo leh oo loo isticmaali karo suuq-geynta suuqa iyo sirdoonka tartanka.
Haddii aad ka shaqeyneysid xog ururinta macaamiisha 'falanqaynta dabeecadaha' iyo sirdoonka ganacsiga, duubista webka waa xalka ugu dambeeya - que es ser un fotografo. Diiwaanka cusub ee soo saaridda xogta webka, boogta webka waa farsamo ah helitaanka iyo soo celinta xogta webka ee qaabab hore loo cayimay oo si sahlan loo falanqeyn karo.
Tilmaame-yaashan, waxaad baran doontaa sida loo sameeyo warshad shabakadeed. Ogsoonow in xoqiddu ay tahay luuqada barnaamijka xasilloon iyo bulshooyinka horumariya 'kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad abuurto faa'iido leh qalab wax lagu nadiifiyo . Webka qashin-saariddu waa fursad aad ku ballaarisid ganacsiyadaada ganacsi oo aad siiso fikrado qiimo leh oo ku saabsan alaabtaada macaamiisha iman kara.
Isbeddelka soo kordhay iyo qodobbada waaxda tiknoolajiyada ayaa caddaynaya. Maalmahan, waxaad si sahlan u soo dejisan kartaa oo u badbaadin kartaa bogagga internetka adiga oo adeegsanaya casrigaaga. Tusaale ahaan, Instapaper waa sawir lagu kalsoonaan karo oo kuu ogolaanaya inaad haysato nuqulka qoraalkaaga bartilmaameedka ah ee qalabkaaga mobile.
Suuqa dhaqaalaha, Maydh. com waa shabakad wakhti go'an oo la tixgeliyo. Qalabkani wuxu abaabulaa oo maamulaa faahfaahinta suuqyada ganacsiga wuxuuna ku tusayaa xogta soo koobid cajiib ah iyo jaantusyo. Maydh. waxay ka caawisaa suuqyadu in ay la socdaan aragtida wax soo saarka iyo qaababka maalgashiga.
La socoshada anshaxa ee shabakadda webka
Goobaha boodboodka badanaa waxay sameeyaan mulkiilayaasha bogagga inay xakameeyaan cinwaankaaga IP. Qaar ka mid ah goobaha durugsan waxay ka kooban yihiin dardaaranka 'Dhammaystiraha Dhammaan'. Dardaaranadaan waxay diidaan waraaqaha webka si ay u xoqaan boggaan internetka.
Webka qashin-saariddu waa hab lagu helo macluumaad laga helo goobo kale. Si kastaba ha noqotee, soo-celinta macluumaadka goobaha iyo soo-saaridda waxyaabaha ku jira boggaaga internetka waxaa si weyn loo tixgeliyaa sida xadgudubka ereyada iyo "Xatooyada. "
Sidee loo sameeyaa xoquleeyaha webka
Ku dheji wax soo saar leh - soo saaruhu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad soo qaadato URL-yada ka baxsan xiriirada dibadda
si loo xakameeyo soo saarka xog isku mid ah in ka badan hal mar
Dhiso HTTP Fetcher - Fetcher wuxuu u shaqeeyaa inuu ka soo qaato bogagga shabakadda bogagga shabakada bartilmaameedka ah
Dhaqdhaqaaq Maamulaha Qeybta URL - Maamulaha ayaa mudnaanta siinaya URL-yada la gooyo oo laga gooyo
Diiwaanka - Tani waa meesha xogta la xoqay ee loo dhoofin doono falanqaynta iyo maaraynta
Ujeeddada ugu muhiimsan ee dhismaha warshad shabakadeed ayaa laga soo saari doonaa xogta laga helo bogagga shabakada iyadoo la fiirinayo wax soo saar iyo waxtarka. Haddii aad ka shaqeynayso maqnaansho balaadhan, fiiri arrimo kale sida isgaarsiinta adeegga, Dib-u-soo-celinta, iyo xalinta DNS. Doorashada luuqadaada barnaamijka ayaa sidoo kale muhiim ah. Tirada wanaagsan ee waraaqaha shabakadda waxay jecel yihiin bogagga shabakada ee Python.
Dhisidda warshad shabakeed waa mid sahlan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso inta jeer ee qalabkaaga shabakada si aad uga fogaato xadgudubka daabacaada iyo bogagga internetka oo ay sabab u tahay kumbuyuutarro badan. Isticmaal oo ku shaqee xoqdo warshad wax ku ool ah adoo hubinaya kala-jiidashada iyo hantida khabiirka ah. Isticmaal cirbadda kor ku xusan si aad u sameysato waraaqaha webka kaas oo ka soo bixi doona baahidaada webkaaga.